Home Wararka Farmaajo oo waqti dhumin cusub bilaabay, codsadayna in la badalo John Mahama
Farmaajo oo waqti dhumin cusub bilaabay, codsadayna in la badalo John Mahama
Farmaajo oo horay u sheegay in uu iska wareejiyay xilka arimaha doorashooyinka iyo amniga dalka ayaa wali u muuqday in uu isagu yahay qofka gadal ka maamulaya arimaha doorashooyinka, RW Rooble uu yahay wiil isaga u adeega. Dad badan ayaa rumaysnaa in Rooble wax ka badaly caqligiisa kana faa’iidsayn doono fursada qaaliga ay umaadda Soomaaliyeed siisay, laakiin waxa muqata in uusan isagu lahayn go’aanka doorashooyinka.
Sida ay sheegayaanw arar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in dowladda Federaalka Soomaaliya ay Midowga Afrika ka dalbatay in la bedelo Ergeyga gaarka ee dhawaan u soo magacaabeen Soomaaliya John Mahama oo ahaa Madaxweynihii hore ee dalka Ghana. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Federaalka ay ku tilmaamtay John Mahama in uusan dhex dhexaad ka noqon karin Arrimaha doorashada dalka ka dhaceysa, isla markaana ay u baahan yihiin la bedelo.
Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in Midowga Afrika uusan kala tashan soo magacaabista Madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama, iyadoona aan loo marin nidaamka dhinaca diblumaasiyada. Hadalka ka soo yeeray Farmaajo ayaa ah mid la doonayo in waqti looga lumayo mucaaaradka iyo doorasho dalka ka dhacdo oo qalqal hor la galiyo.
Farmaajo ayaa ku doodaya in Ergeyga gaarka ee dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya uu goobo Ganacsi ku leeyahay Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya, uuna dhex dhexaad ka noqon karin arrimaha dalka. Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa shalay soo dhaweeyay magacaabista Madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Mahama, iyagoona balan qaaday inay la shaqeyn doonaan Ergeyga, hayeeshee ay dalbadeen in la bedelo la taliyihiisa.